သူတို့လေးတွေ တညှောင်ညှောင်လုပ်နေတာ ဒါတွေကြောင့်ဆိုတာသင်သိရဲ့လား? – Trend.com.mm
ကြောင်လေးတွေက ဘာလို့ညှောင်ညှောင်အော်ကြတာလဲ?ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကြောင်လေးတွေကသင်ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးသင့်ကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိလို့ပါ 😉သူတို့အော်နေရင် သင်အာရုံမစိုက်ပဲမနေနိုင်ဘူးမဟုတ်လား? တကယ်လို့သင့်မှာကြောင်လေးတစ်ကောင်ရှိရင် သူတို့အော်သံတွေကနေ ကြောင်ဘာသာစကားတောင်တတ်မြောက်သွားနိုင်ပါတယ်နော်။
ဒါနဲ့ သူတို့ရဲ့ညှောင်ညှောင်အော်သံက ဗိုက်ဆာတိုင်းအော်နေတာလို့ သင်ထင်နေတယ်မှတ်လား?တကယ်တော့မတူပါဘူး။ညှောင်ညှောင်အော်သံက မတူညီတဲ့အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးကွဲပြားတတ်ပါသေးတယ်။တကယ်တော့ကြောင်လေးတွေက ကလေးတွေလိုပါပဲ။ကလေးတွေကလည်း လိုချင်တာရှိရင် မရမချင်းငိုကြ၊ဂျီကျကြတယ်လေ။ကြောင်လေးတွေ ညှောင်ညှောင်လုပ်ရခြင်းအကြောင်းလေးတွေကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ပြန်ပြီးမျှဝေပေးရမယ်ဆိုရင်တော့…
ကြောင်လေးတွေက ကလေးလေးတွေလိုပါပဲဆို။အထူးသဖြင့်ကြောင်သေးသေးလေးတွေကသခင်အနားမှာပွတ်သီးပွတ်သပ်နေချင်ကြတယ်။ငယ်ငယ်တုန်းကအေးလို့၊ဗိုက်ဆာလို့၊နာလို့ ကြောင်အမေကြီးတွေနားကပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ အရွယ်ရောက်လာတော့လူသားသခင်တွေကိုသာ တညှောင်ညှောင်နဲ့ခင်တွယ်ကြတယ်။သူတို့ဂျီကျလို့ရမှန်း အလိုလိုသိနေကြတာပါ။ကြောင်လေးတွေရဲ့ ညှောင်ညှောင်အသံကချစ်စရာကောင်းသလို သူတို့ညှောင်ညှောင်အော်ရင်သခင်တွေဆီက သူတို့လိုချင်တာရမှန်းလည်းသိနေကြပါတယ်တဲ့။တကယ်လို့ သင့်ရဲ့ကြောင်လေးကညှောင်ညှောင်လုပ်နေရင် ဒါက သင်သူ့အပေါ်အာရုံစိုက်စေချင်လို့၊သူလိုချင်တာကိုဂျီကျချင်လို့ဆိုတာပါပဲ။
သူတို့ဗိုက်ဆာတဲ့အခါ၊သူတို့စားနေကျအချိန် အစားမကျွေးသေးရင်လည်းတညှောင်ညှောင်နဲ့ပါ။တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း ဆော့ချင်လို့အော်တာပါ။သူတို့အနားမှာ ကစားဖို့အရုပ်လေးတွေထားပေးကြည့်လိုက်၊အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ဆော့နေပါလိမ့်မယ်။တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း သခင်ဖြစ်သူအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါပျော်လို့အော်တတ်ပါတယ်။ကြောင်လေးတွေက အကြာကြီးတစ်ကောင်တည်းနေရတာလည်းမကြိုက်ပါဘူး။သူတို့က သခင်အနားမှာနေမယ်။အော်မယ်။အဲ့ဒီလိုတညှောင်ညှောင်လုပ်နေရင် သင်ကသူတို့ကိုခဏလောက်အာရုံစိုက်ကြည့်လိုက်ပေါ့။သူတို့က သင့်ကို ညှောင်ညှောင်နဲ့စကားတွေပြောနေပါလိမ့်မယ်။သူတို့က ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေထက် လူကိုစိတ်ချမ်းသာပျော်မွေ့စေတာအမှန်ပါပဲ။
ကြောင်လေးတွေက နေမကောင်းတဲ့အခါမှာလည်း သခင်သိအောင်တညှောင်ညှောင်လုပ်ပါတယ်။တကယ်လို့သင့်ရဲ့ကြောင်ကအသက်အရွယ်လည်းကြီးနေပြီ၊အော်နေလို့အစားကျွေးရင်လည်းမစားပဲထိုင်းမှိုင်းနေမယ်။အော်ပဲအော်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အမြန်ဆုံးဆရာဝန်နဲ့ပြကြည့်နော်။ငယ်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျန်းမာရေးတစ်ခုခုမကောင်းဖြစ်နေလို့ပါ။ကြောင်လေးတွေက စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့အခါမှာလည်းအော်နေတတ်ပါတယ်။သခင်နဲ့အကြာကြီးခွဲနေရတာတို့ဘာတို့ဖြစ်ရင်ပေါ့။
ကြောင်လေးတွေကိုချစ်ပေမဲ့ အော်နေတာကိုနားညည်းတယ်၊ခဏခဏတညှောင်ညှောင်လုပ်နေတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒါလေးတွေလုပ်ကြည့်ပါ။ကြောင်လေးသင်အစားစားနေတုန်း တညှောင်ညှောင်လုပ်နေတာလား။ဒါဆိုသူစားချင်နေလို့ပေါ့။ဒါပေမဲ့ ဒီလိုသာ သူအော်တိုင်း သင်ကနားအေးပြီးရောဆိုပြီးချကျွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုတောင်ဆိုးသွားပါလိမ့်မယ်။သူအော်ရင် အစားစားရမယ်ဆိုတာသိနေမှတော့တိတ်ပါ့မလား။သူတို့အော်တာရပ်သွားပြီဆိုတော့မှသူတို့ရဲ့အစာခွက်လေးထဲသွားထည့်ပေးထားပါ။ဒါဆို သူတို့သင့်အနားမှာ တညှောင်ညှောင်လုပ်နေတိုင်းအစားမစားရဘူးဆိုတာသိသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒါမှမဟုတ် သင်အလုပ်လုပ်နေတုန်း သင်အာရုံစိုက်ခံရအောင်အော်နေတာဆိုရင်တော့ သူတို့ကိုချက်ချင်းအာရုံမစိုက်ပါနဲ့။ခဏနေလို့တိတ်သွားမှပွေ့ချီတာ၊အစာလေးကျွေးလိုက်တာမျိုးလုပ်ပါ။ဒါဆို သူတို့အော်နေရင်သခင်ရဲ့လျစ်လျူရှုခံရပြီး သူတို့တိတ်နေမှသခင်ဖြစ်သူရဲ့ ဂရုစိုက်မှုရမယ်ဆိုတာသိသွားပါလိမ့်မယ်။
ကဲ ဒါတွေကတော့ကြောင်လေးတွေတညှောင်ညှောင်လုပ်နေရတဲ့အကြောင်းလေးတွေပါပဲ။သခင်ဖြစ်သူရဲ့အလေးထားမှုလေးလိုချင်နေကြလို့ဂျီကြနေတဲ့ကလေးလေးတွေကို များများချစ်ပေးကြနော် 😍
ကွောငျလေးတှကေ ဘာလို့ညှောငျညှောငျအျောကွတာလဲ?ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကွောငျလေးတှကေသငျထငျထားတာထကျပိုပွီးသငျ့ကိုလှမျးမိုးခြုပျကိုငျနိုငျစှမျးရှိလို့ပါ သူတို့အျောနရေငျ သငျအာရုံမစိုကျပဲမနနေိုငျဘူးမဟုတျလား? တကယျလို့သငျ့မှာကွောငျလေးတဈကောငျရှိရငျ သူတို့အျောသံတှကေနေ ကွောငျဘာသာစကားတောငျတတျမွောကျသှားနိုငျပါတယျနျော။
ဒါနဲ့ သူတို့ရဲ့ညှောငျညှောငျအျောသံက ဗိုကျဆာတိုငျးအျောနတောလို့ သငျထငျနတေယျမှတျလား?တကယျတော့မတူပါဘူး။ညှောငျညှောငျအျောသံက မတူညီတဲ့အခွအေနကေိုလိုကျပွီးကှဲပွားတတျပါသေးတယျ။တကယျတော့ကွောငျလေးတှကေ ကလေးတှလေိုပါပဲ။ကလေးတှကေလညျး လိုခငျြတာရှိရငျ မရမခငျြးငိုကွ၊ဂြီကကြွတယျလေ။ကွောငျလေးတှေ ညှောငျညှောငျလုပျရခွငျးအကွောငျးလေးတှကေို ဗဟုသုတအနနေဲ့ပွနျပွီးမြှဝပေေးရမယျဆိုရငျတော့…
ကွောငျလေးတှကေ ကလေးလေးတှလေိုပါပဲဆို။အထူးသဖွငျ့ကွောငျသေးသေးလေးတှကေသခငျအနားမှာပှတျသီးပှတျသပျနခေငျြကွတယျ။ငယျငယျတုနျးကအေးလို့၊ဗိုကျဆာလို့၊နာလို့ ကွောငျအမကွေီးတှနေားကပျကွတယျ။ဒါပမေဲ့ အရှယျရောကျလာတော့လူသားသခငျတှကေိုသာ တညှောငျညှောငျနဲ့ခငျတှယျကွတယျ။သူတို့ဂြီကလြို့ရမှနျး အလိုလိုသိနကွေတာပါ။ကွောငျလေးတှရေဲ့ ညှောငျညှောငျအသံကခဈြစရာကောငျးသလို သူတို့ညှောငျညှောငျအျောရငျသခငျတှဆေီက သူတို့လိုခငျြတာရမှနျးလညျးသိနကွေပါတယျတဲ့။တကယျလို့ သငျ့ရဲ့ကွောငျလေးကညှောငျညှောငျလုပျနရေငျ ဒါက သငျသူ့အပျေါအာရုံစိုကျစခေငျြလို့၊သူလိုခငျြတာကိုဂြီကခြငျြလို့ဆိုတာပါပဲ။
သူတို့ဗိုကျဆာတဲ့အခါ၊သူတို့စားနကေအြခြိနျ အစားမကြှေးသေးရငျလညျးတညှောငျညှောငျနဲ့ပါ။တဈခါတဈလကေတြော့လညျး ဆော့ခငျြလို့အျောတာပါ။သူတို့အနားမှာ ကစားဖို့အရုပျလေးတှထေားပေးကွညျ့လိုကျ၊အဲ့ဒါလေးတှနေဲ့ဆော့နပေါလိမျ့မယျ။တဈခါတဈလကေတြော့လညျး သခငျဖွဈသူအိမျပွနျလာတဲ့အခါပြျောလို့အျောတတျပါတယျ။ကွောငျလေးတှကေ အကွာကွီးတဈကောငျတညျးနရေတာလညျးမကွိုကျပါဘူး။သူတို့က သခငျအနားမှာနမေယျ။အျောမယျ။အဲ့ဒီလိုတညှောငျညှောငျလုပျနရေငျ သငျကသူတို့ကိုခဏလောကျအာရုံစိုကျကွညျ့လိုကျပေါ့။သူတို့က သငျ့ကို ညှောငျညှောငျနဲ့စကားတှပွေောနပေါလိမျ့မယျ။သူတို့က ဆိုရှယျမီဒီယာတှထေကျ လူကိုစိတျခမျြးသာပြျောမှစေ့တောအမှနျပါပဲ။
ကွောငျလေးတှကေ နမေကောငျးတဲ့အခါမှာလညျး သခငျသိအောငျတညှောငျညှောငျလုပျပါတယျ။တကယျလို့သငျ့ရဲ့ကွောငျကအသကျအရှယျလညျးကွီးနပွေီ၊အျောနလေို့အစားကြှေးရငျလညျးမစားပဲထိုငျးမှိုငျးနမေယျ။အျောပဲအျောနမေယျဆိုရငျတော့ အမွနျဆုံးဆရာဝနျနဲ့ပွကွညျ့နျော။ငယျသေးတယျဆိုရငျတော့ကနျြးမာရေးတဈခုခုမကောငျးဖွဈနလေို့ပါ။ကွောငျလေးတှကေ စိတျဖိစီးမှုမြားတဲ့အခါမှာလညျးအျောနတေတျပါတယျ။သခငျနဲ့အကွာကွီးခှဲနရေတာတို့ဘာတို့ဖွဈရငျပေါ့။
ကွောငျလေးတှကေိုခဈြပမေဲ့ အျောနတောကိုနားညညျးတယျ၊ခဏခဏတညှောငျညှောငျလုပျနတောမကွိုကျဘူးဆိုရငျဒါလေးတှလေုပျကွညျ့ပါ။ကွောငျလေးသငျအစားစားနတေုနျး တညှောငျညှောငျလုပျနတောလား။ဒါဆိုသူစားခငျြနလေို့ပေါ့။ဒါပမေဲ့ ဒီလိုသာ သူအျောတိုငျး သငျကနားအေးပွီးရောဆိုပွီးခကြှေးလိုကျမယျဆိုရငျပိုတောငျဆိုးသှားပါလိမျ့မယျ။သူအျောရငျ အစားစားရမယျဆိုတာသိနမှေတော့တိတျပါ့မလား။သူတို့အျောတာရပျသှားပွီဆိုတော့မှသူတို့ရဲ့အစာခှကျလေးထဲသှားထညျ့ပေးထားပါ။ဒါဆို သူတို့သငျ့အနားမှာ တညှောငျညှောငျလုပျနတေိုငျးအစားမစားရဘူးဆိုတာသိသှားပါလိမျ့မယျ။
ဒါမှမဟုတျ သငျအလုပျလုပျနတေုနျး သငျအာရုံစိုကျခံရအောငျအျောနတောဆိုရငျတော့ သူတို့ကိုခကျြခငျြးအာရုံမစိုကျပါနဲ့။ခဏနလေို့တိတျသှားမှပှခြေီ့တာ၊အစာလေးကြှေးလိုကျတာမြိုးလုပျပါ။ဒါဆို သူတို့အျောနရေငျသခငျရဲ့လဈြလြူရှုခံရပွီး သူတို့တိတျနမှေသခငျဖွဈသူရဲ့ ဂရုစိုကျမှုရမယျဆိုတာသိသှားပါလိမျ့မယျ။
ကဲ ဒါတှကေတော့ကွောငျလေးတှတေညှောငျညှောငျလုပျနရေတဲ့အကွောငျးလေးတှပေါပဲ။သခငျဖွဈသူရဲ့အလေးထားမှုလေးလိုခငျြနကွေလို့ဂြီကွနတေဲ့ကလေးလေးတှကေို မြားမြားခဈြပေးကွနျော